Maitiro ekuvhura akaomeswa mafaera ne password pane iPhone | IPhone nhau
Maitiro ekuvhura chero yakamanikidzwa .ZIP uye .rar faira ine password pane iPhone
Izvi ndizvo zvinhu zvidiki izvo zvinombonyanya kuomarara pane iyo iPhone. Kana iwe wakambogashira chero mhando yezvinyorwa kuburikidza neemail kana kuburikidza nefaira gore, iwe unoziva chaizvo izvo zvatiri kutaura nezvazvo. Apple haina chero mashandiro ku zvakapusa kuvhura akaomeswa mafaera ane password.
Parizvino iPhone Isu tinokudzidzisa iwe kuburikidza nedzidziso iyi kuti ungavhura sei chero yakatsindirwa .ZIP faira uye .rar ne password pane iyo iPhone nenzira iri nyore yaunogona kufungidzira. Gara nesu uye uone kuti ungazviita sei mumaminitsi asingasviki maviri.
Chinhu chekutanga chatichazoda kunyorera, mune ino iri nyore kushandisa ndeye Unzip, application yemahara zvachose inowanikwa paApp App. Iyo inorema chete 56,7 MB kuti iwe ugone kuikanda padhuze kubva chero kupi pasina kurasikirwa yakawanda yedata mwero, uye inoenderanawo nechero iPhone kana iPad iri kumhanya iOS 8.0 kana yemberi vhezheni, saka isu hatizove nechero mhando yekuenderana nyaya . Isu tinokusiya iwe pazasi pekubatanidza kuti iwe utore pasi.
Iye zvino iwe unofanira kungotevera matanho aya Ini ndinoratidza pazasi kuti ndikwanise kuvhura chero rudzi rweakakomberedzwa faira pane yako iPhone kana iPad, kusanganisira izvo zvine password:
Dzvanya bhatani share mune iyo yakamanikidzwa faira ine password
Sarudza sarudzo "Vhura mu ..." uye pukuta izvo zvinoshandiswa kusvikira waona Unzip icon
Dzvanya "Kopa Unzip" uye iyo Unzip application ichavhura yakanangana neiyo kopi faira
Zvino sarudza iyo yakamanikidzwa faira iwe yaunoda, inokumbira iwe kuti upinde mu pasiwedhi
Paunenge iwe wangopinda pasiwedhi nenzira kwayo, isu tinogadzira yemahara kopi yegwaro
Kana tapinda mufaira, tinogona kuona mafaera ese ari muPDF fomati (kana chero) yaive mairi uye tinogona kuatarisa
Ndiwo maitiro ari nyore kuti ungavhura sei chero rudzi rweakakomberedzwa faira ine password pa iPhone ne iPad. Kana uine chero mibvunzo unogona kuisiya mubhokisi remashoko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuvhura chero yakamanikidzwa .ZIP uye .rar faira ine password pane iPhone
Zvinoenderana neBloomberg tichava nemapurogiramu epasi rose eIOS uye macOS muna 2021
Iyo EMT yeMadrid inogadziridza yayo app uye pakupedzisira inochinjisa kune iyo nyowani nguva